iPhone မူရင်းလားအတုလား၊ မလှည့်စားဘူးလားဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ulator Emulator.online ▷🥇
iPhone ကမူရင်းလား၊ အတုလား၊
iPhone ဟာမူလလား၊ အတုလားဟုတ်လားဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။ ပိုင်ရှင်သည် IMEI (International Mobile Equipment Identification) ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်သို့မဟုတ် Apple ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိနံပါတ်စဉ်ကိုကြည့်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များ ရှိ၍ ၎င်းစက်သည်စစ်မှန်ခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ်ကိုပုံတူကူးရန်အထောက်အကူပြုသည်။ သူတို့တွင်ဖန်သားပြင်၊ လက်မှတ်နှင့်လိုဂိုတို့ပါ ၀ င်သည်။
IMEI (အင်္ဂလိပ်အတွက်အတိုကောက်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိုဘိုင်းအဖွဲ့၏အထောက်အထား) တစ်ခုချင်းစီကိုဆဲလ်ဖုန်းများအတွက်ထူးခြားတဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားဝင်သက်ဆိုင်သောအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်စက်ကိရိယာမျှမတူပါ။
Serial နံပါတ်သည်အက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကုဒ်နံပါတ်ဖြစ်ပြီးစက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသည့်နေရာ၊ ထုတ်လုပ်သည့်နေ့စွဲ၊ ပုံစံ၊ ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းကို IMEI နှင့်တူညီသောနေရာများတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
မူရင်းအိုင်ဖုန်းတွင်၊ ဤအချက်အလက်များကိုသေတ္တာ၊ စမတ်ဖုန်း၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်မှရရှိနိုင်သည်။
ပြန်ဖွင့် / Apple
IMEI နှင့်အမှတ်စဉ်နံပါတ်သည်စက်ပုံးပေါ်ရှိဘားကုဒ်ဘေးတွင်ရှိသည်။ ရှေ့ဆက်သွား, ကရေးသားလိမ့်မည် IMEI သို့မဟုတ် IMEI / MEID (1) နှင့် (S) နံပါတ်စဉ် (2), တစ်ဂဏန်းသို့မဟုတ်အက္ခရာနံပါတ်စဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်။ ဤရွေ့ကားညှို့များသည်အောက်ဖော်ပြပါမေးမြန်းချက်များ၌ဖော်ပြထားသည်နှင့်တူညီရမည်။
IMEI ကို system မှရှာဖွေရန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လုပ်ပါ ချိန်ညှိချက်များ→အထွေထွေ→အကြောင်း။ ပစ္စည်းကိုသင်မတွေ့မချင်းမျက်နှာပြင်အောက်သို့ဆွဲချပါ IMEI / MEID mi အမှတ်စဉ်နံပါတ်.
iPhone တစ်ခုစီတွင် IMEI နံပါတ်ရှိသည်။ တည်နေရာမော်ဒယ်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အများစုမှာ SIM ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
iPhone 6၊ iPhone6Plus၊ iPhone SE (ပထမမျိုးဆက်)၊ iPhone 1s၊ iPhone 5c နှင့် iPhone5တို့တွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာများကိုစမတ်ဖုန်း၏နောက်ကျောတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ၎င်းကိုစကားလုံး၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ iPhone ကို.
သင်သည်မည်သည့်အင်တာနက် browser ကိုမဆို Apple ID ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သင်၏ login အသေးစိတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးအပိုင်းသို့ scroll လုပ်ပါ devices များ။ IMEI ကိုသင်ရှာဖွေချင်သောစက်၏ပုံပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါကပြတင်းပေါက်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
နံပါတ်အပြင်အပြင်၊ မော်ဒယ်၊ ဗားရှင်းနှင့်အမှတ်စဉ်နံပါတ်စသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြသသည်။
IMEI ကိုရှာရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာစာရိုက်ခြင်းဖြစ်သည် * # နှစ်ဆယ့်တစ် # ကိရိယာကီးဘုတ်ပေါ်။ အချက်အလက်များကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အလိုအလျောက်ပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်မှုမှတဆင့် လွှမ်းခြုံစစ်ဆေးပါ (လွှမ်းခြုံစစ်ဆေးပါ)
Apple တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုရှိသည်။ အသုံးပြုသူသည် Apple အာမခံချက်အခြေအနေနှင့်ထပ်မံ AppleCare ခံစားခွင့်ကိုဝယ်ယူရန်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည်ကိရိယာ၏အမှတ်စဉ်နံပါတ်ကိုရိုက်ရမည်။
အကယ်၍ အိုင်ဖုန်းသည်မူလမဟုတ်ပါကကုဒ်ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ အကယ်၍ အားလုံးကောင်းမွန်စွာသွားနေလျှင်၊ ဝယ်ယူသည့်နေ့သည်မှန်ကန်မှုရှိမရှိနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုလွှမ်းခြုံမှုရှိမရှိသိရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
operating system နှင့် installed applications များ
iPhone အားလုံးသည် iOS system ပေါ်တွင်သာအလုပ်လုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ သင်သည်ဖုန်းကိုဖွင့်ပြီး၎င်းသည် Android ဖြစ်လျှင်၎င်းစက်သည်အတုဖြစ်သည်မှာသံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါ။ သို့သော်အတုများသည် Apple ဆော့ဝဲလ်၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုတုပသည့်ကိရိယာများကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ဖုန်းတွင် App Store၊ Safari browser၊ Siri assistant စသည့်သီးသန့် application များရှိမရှိစစ်ဆေးသင့်သည်။ သံသယကိုဖယ်ရှားရန် iOS version ကို settings တွင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာပါ ချိန်ညှိချက်များ→အထွေထွေ→ဆော့ဝဲလ်အပ်ဒိတ်။ အဲဒီမှာအသုံးပြုသူသည်စနစ်ဗားရှင်းနှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်၊ သဟဇာတဖြစ်သောထုတ်ကုန်များနှင့်သတင်းများနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့သည်။
ဤအကြံပေးချက်သည်တစ်ပတ်ရစ် iPhone ဝယ်သူများအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပထမဆုံးအသုံးပြုသူသည်မျက်နှာပြင်ကိုပျက်စီးစေပြီး၎င်းကို Apple မဟုတ်သောသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီမှအတည်ပြုသောအရာဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။
သို့သော်aကိုသုံးခြင်းနှင့်အတူပြproblemနာကဘာလဲ စောငျ့ရှောကျ မူရင်းမဟုတ်ပါလား ထုတ်လုပ်သူက“ အက်ပလီကေးရှင်းမဟုတ်သော display များသည်လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပြissuesနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါကအတွက်အမှားများကိုဆိုလိုနိုင်ပါတယ် Multi-touch, အခြားဆုတ်ယုတ်မှုများအကြား, ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုတိုးမြှင့်, အတင်းအဓမ္မထိ။
iPhone 11 မှစနစ်ကို ဖြတ်၍ မူလကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ချိန်ညှိချက်များ→အထွေထွေ→အကြောင်း.
မင်းမြင်ရင် မြင်ကွင်းပေါ်ရှိအရေးကြီးသတင်းစကား ဒီအိုင်ဖုန်းမှာ Apple ရဲ့မူလမျက်နှာပြင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး, မူလအစားထိုးလျှောက်ထားခဲ့ကြမည်မဟုတ်ပါ။
ပစ္စည်း၏ကိုယ်ထည်၏အချို့သောအင်္ဂါရပ်များကအိုင်ဖုန်းသည်ဟုတ်မှန်သည်မမှန်ကိုပြနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာ Apple ပစ္စည်းဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်အသေးစိတ်သိဖို့အရေးကြီးတယ်။
iPhone7ကတည်းက Apple သည် P2 ဟုလူသိများသည့်စမတ်ဖုန်းများ၌ရိုးရာနားကြပ်ပေါက်များကိုမသုံးပါ။ ထို့ကြောင့်၊ စမတ်ဖုန်းကိုအားပြန်သွင်းနိုင်သည့်လျှပ်စီးအမျိုးအစား connector ရှိသူများကိုသာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် Bluetooth မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကြိုးမဲ့မော်ဒယ်များ။
အကယ်လို့သင်ဟာသာမာန် headphone jack ပါတဲ့ iPhone အသစ်ကို ၀ ယ်လိုက်ရင်ဒီပစ္စည်းကစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
အိုင်ဖုန်းအားလုံးမှာဖုန်းရဲ့ကျောဘက်မှာအကျော်ကြားဆုံး Apple လိုဂိုရှိတယ်။ မူရင်းမှာတော့အသုံးပြုသူကအိုင်ကွန်ကိုလျှောလိုက်တဲ့အခါမျက်နှာပြင်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု၊ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုသူတို့သတိမပြုမိကြဘူး။
အထူးပြုလုပ်ထားသော်ငြားလည်းပုံတူကူးခြင်းနှင့်အတုထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်ဤအမျိုးအစားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်ရလဒ်မှာများသောအားဖြင့်မျက်နှာပြင်နှင့် Apple ၏ပုံသဏ္betweenာန်ကွာဟမှုရှိသည်။
ဒီပစ္စည်းကိုလက်နဲ့ကိုင်ထားပြီး Apple ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုမော်ဒယ်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အရောင်များ၊ ခလုတ်များ၏အနေအထား၊ ကင်မရာများနှင့်တောက်ပမှုများကဲ့သို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ဆေးပါ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီပင် finish ကိုအမျိုးအစားကိုဖော်ပြသည်။ iPhone 11 Pro Max အတွက် "matte textured glass, frame at around stainless steel frame" လိုပေါ့။
ပုံစံတစ်ခုစီအတွက်ရရှိနိုင်သောစွမ်းရည်ကိုလည်းကြည့်ပါ။ အကယ်လို့သင်ဟာ 128GB iPhone X ကိုကမ်းလှမ်းလာရင်သတိထားပါ၊ 64 Series ဒါမှမဟုတ် 256GB သာရှိတဲ့ဒီစီးရီးမှာရွေးချယ်စရာတွေရှိတယ်။
အိုင်ဖုန်းများတွင်အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှစမတ်ဖုန်းများတွင်အသုံးများသောလုပ်ဆောင်ချက်များမရှိပါ။ Apple ထုတ်ကုန်တွေမှာဒီဂျစ်တယ်တီဗွီတွေ၊ ၎င်းတို့တွင်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်များ (သို့) dual-sim အတွက်အံဆွဲမရှိပါ။
သတိပြုရန်: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်များတွင်နှစ်ဆ Simulator တစ်ခုရှိသည်။ chip တစ်ခုတည်းအတွက်နေရာမရှိသော်လည်း nano-SIM ကဒ်နှင့် e-SIM ကဒ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဒီဂျစ်တယ်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အနည်းငယ်သာသိသာထင်ရှားသော်လည်း၊ ကမ်းလှမ်းမှုသည်မဖြစ်နိုင်ပါကသံသယဖြစ်ရန်အရေးကြီးသည်။ အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသီးသန့်စတိုးတစ်ခုတွင် iPhone တစ်ခုကိုအလွန်နိမ့်သောဈေးဖြင့်ရှာပါကသံသယဖြစ်ပါ။
မှတ်သားသင့်သည်မှာအချို့သောမူရင်းပစ္စည်းများကိုလေးနက်သောကုမ္ပဏီများကများသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုပြသခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကြောင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချကြသည်ဟုလည်းခေါ်သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး။ ယေဘုယျအားဖြင့်စတိုးဆိုင်များမှတန်ဖိုးလျှော့ချရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုသတင်းပို့သည်။
နာမည်တစ်ခုဖော်ပြသည့် iPhone ပြသမှုသည်အချိန်အတန်ကြာပြသခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုတွင်အကာအကွယ်မပေးနိုင်။ ၀ ယ်သူသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကြောင့်အချို့အမှတ်အသားများရှိနိုင်သည်။
ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောစက်သည်ပြသနာအချို့ကြောင့်ထုတ်လုပ်သူထံပြန်လာပြီးအစိတ်အပိုင်းများကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ ဘက်ထရီနှင့်နောက်ဘက်ကိုလည်းပြောင်းလဲနေကြသည်။ သူတို့ကိုယေဘုယျအားဖြင့် ၁၅% လျှော့စျေးဖြင့်ရောင်းချပြီးစမတ်ဖုန်းအသစ်နှင့်အတူတူပင်အာမခံချက်များရှိသည်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ထားခြင်းရှိမရှိမည်သို့သိရမည်နည်း
ဒါဟာတဆင့်သိရန်ဖြစ်နိုင်သည် မော်ဒယ်နံပါတ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သွားပါ ချိန်ညှိချက်များ→အကြောင်း။ မော်ဒယ်နံပါတ်အက္ခရာနှင့်အတူစတင်လျှင် Metroအသစ်ဖြစ်နေတယ် သင်စာနှင့်စတင်ပါ F, ဒီဟာကိုပြုပြင်ပြီးပါပြီ
သင်စာကြည့်ဖို့ဖြစ်ပျက်လျှင် P၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ စာ မွောကျ Apple က၎င်းအားပျက်စီးနေသော device ကိုအစားထိုးရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ဆံပင်အရောင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သောအကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်း ၇ ခု
Windows၊ macOS နှင့် Linux အတွက်အကောင်းဆုံး webcam အစီအစဉ် ၈ ခု
ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာဖြင့်ဓာတ်ပုံ watermark လုပ်နည်း
PC ပေါ်တွင်ပွတ်ဆွဲရန်အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ် ၈ ခု
ရာသီဥတုအက်ပလီကေးရှင်း (၆) ခုကြောင့်ရာသီဥတုကသင့်ကိုမစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူး
ပရိုဂရမ် ၈ ခုသည်ကွန်ပျူတာကိုမည်ကဲ့သို့ပရိုဂရမ်တင်ရမည်ကိုမသိဘဲနှင့်ပင်ဖန်တီးရန်အတွက်ဖြစ်သည်
Windows app ကိုအစားထိုးရန်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံကြည့်ရှုသူ (၁၀) ဦး
Windows, Linux နှင့် macOS များအတွက် bootable flash drive တစ်ခုဖန်တီးရန်အစီအစဉ် ၆ ခု
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ PC နဲ့ Instagram ပုံတွေကိုဓာတ်ပုံနဲ့ဗွီဒီယိုတင်နည်း
Keyboard ကိုပြုပြင်မထားဘူး - ပြtheနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပြီးဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်
၀ ယ်ရန်စမတ်ဖုန်း (သို့) စက်ပစ္စည်းများ
ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအကူအညီများအတွက် TeamViewer အတွက်အခြားနည်းလမ်းများ